राजनीतिमा नातागोताको नालीबेली
राजनीतिमा नातागोताको नालीबेली कांग्रेसमा कोइराला, नेकपामा दाजुभाइ र पति–पत्नी
लिलाराज खनाल काठमाडौं, २२ असार
राजतन्त्र वंश परम्पराबाट चलेका कारण पनि आलोचित थियो । मुलुक यतिबेला लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलेको छ । पञ्चायतकालमा राज गरेका नेता अहिले पनि राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय छन् । राजा फालिए । निर्वाचित नेताको नेतृत्वमा देश चल्दै छ । तर, हाम्रा राजनीतिक दल भने अहिले पनि वंश परम्पराले धानेको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की दाजु–बहिनी हुन् । भोजपुरको मानेभन्ज्याङमा बुबा रामबहादुर र माता मिथिलाकी छोरी विद्या हुन् ।
विद्याकी बुबा रामबहादुर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका साक्खे मामा हुन् । ज्ञानेन्द्रका मामा तथा विद्याका काका जयन्द्रबहादुर पाण्डे २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका स्वकीय सचिव थिए ।
२०१५ सालमा कांग्रेसको तर्फबाट सांसद भएका खड्गबहादुर कार्की ज्ञानेन्द्रबहादुरका काका हुन् । कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्का र कार्कीबीच फुपाजु र सालाको नाता छ । डा. खड्काका दाइ जनार्दनबहादुर खड्काले कार्कीकी फूपुसँग विवाह गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको भतिजी किरणकी सम्धिनी हुन् । किरण कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सभासद् हुन । किरण यादवका छोराले भण्डारीकी छोरी निशाकुसुमसँग विवाह गरेका हुन् । पूर्वराष्ट्रपति यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन पनि कांग्रेसका पूर्वसभासद् हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वसांसद डा. आरजु राणा श्रीमान्–श्रीमती हुन् । डा. आरजुकी आमा प्रतिभा राणाले लामो समयसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा रहेर काम गरिन् । उनी पूर्वसभासद् पनि हुन् ।
दुई वर्षअघि जापानकी राजदूत भएकी प्रतिभा राणाका बुबा शेरबहादुर मल्ल हुन् । उनी नेपाली सेनाका जर्नेल पनि हुन् ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रका शाही पाश्र्वर्ती (एडीसी) थिए । शेरबहादुरका छोरा अर्थात् डा. आरजुका मामा शान्तबहादुर मल्ल नेपाली सेनाको सहायक रथी पदमा हुँदा पनि सैनिक सचिवका रुपमा दरबारमा थिए ।
कांग्रेसमा कोइराला वर्चस्व
नेपालको राजनीतिमा सिन्धुलीको दुम्जा थातथलो भएका कोइरालाको प्रभाव अहिले पनि छ । चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री हुँदादेखिकै दुम्जाका कोइराला खलकको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा आजसम्मै पाइन्छ । दुम्जाका कालिदास कोइरालालाई चन्द्रशमशेरले सिंहदरबारमा जागिर दिएदेखि नै कोइराला परिवार नेपालको राजनीतिमा हावी भएको हो ।
मुलुकका तीन प्रधानमन्त्री जन्माउने कृष्णप्रसादका दाजु उनै कालीदास सरदारसम्म भए । कालीदासकै सिफारिस र संरक्षणमा उनका भाइ नारायणप्रसादले विराटनगर र कृष्णप्रसादले सिरहामा नेपाल भारत–सीमाको भन्सार रास्व संकलनको ठेक्काको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरसँगको असमझदारीपछि कालीदास सरकारबाट निकालिए र सिधै जनकपुर गएका थिए । कृष्णप्रसादका छोराहरू धेरै जसो राजनीतिमा संलग्न भए ।
कृष्णप्रसादका जेठा छोरा मातृकाप्रसाद हुन् । उनी नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसको सभापति भए । प्रधानमन्त्री भएर पनि राजदूत हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् ।
मातृका संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूत भएका थिए । उनकै छोरा कमल कोइराला नेकपा एमाले हुँदै हाल नेकपाका नेता छन् । उनी काेरियाका लागि नेपाली राजदूत भएर पनि आफ्ना विचार लेखका माध्यमबाट प्रवाह गर्छन् । मातृकाका छोराहरू विमल, अजय र विजय भने राजनीतिमा लागेनन् ।
कृष्णप्रसादका माइला छोरा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । बीपीका कनिष्ठ पुत्र डा. शशांक कोइराला हाल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री छन् ।
लामो समय चिकित्सा पेसामा संलग्न महामन्त्री डा. शशांक २०५९ सालदेखि चिकित्सक पेसा छोडेर राजनीतिमा आएका थिए ।
विश्वेश्वर प्रसादका जेठा छोरा प्रकाश कोइराला पनि राजनीतिमै छन्, तर ओझेलमा परेर । ५० को दशकदेखि राजनीतिमा लागेका प्रकाश ५१ र ५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा विजयी भएर वन तथा भू संरक्षण मन्त्रीसम्म भए ।
२०५९ सालमा संसद् भंग गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनकारी कदमलाई स्वागत गर्दै लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा गठित सरकारमा प्रकाश सहभागी भएपछि उनी कांग्रेसबाटै निकालिए । हाल उनी नेपाली कांग्रेस (राष्ट्रवादी) पार्टी गठन गरेर राजनीतिमा छन् ।
कृष्णप्रसादका साहिँला छोरा हरिप्रसादको भारत निर्वासनको बेला बेतियामै निधन भयो । कृष्णप्रसादका काइला छोरा केशव कोइराला हुन् । केशवकी पत्नी नोना कोइराला कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य थिइन् ।
केशव र नोनाका जेठा छोरा डा. शेखर कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन् । चिकित्सा सेवामा लागेका डा. शेखर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति पनि हुन् ।
कृष्णप्रसादका अन्तरे छोरा तारणीप्रसाद कोइराला राजनीतिको साथै साहित्य र पत्रकारितामा समेत संलग्न थिए । उनको निधनपछि छोरी कल्पनाका श्रीमान् लक्ष्मणबहादुर बस्नेत कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनले कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको २२ वर्षसम्म अध्यक्ष भएर काम गरे ।
कृष्णप्रसादकै कान्छा छोरा गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँचपटकसम्म प्रधानमन्त्री भए । उनी नवौंदेखि ११औं महाधिवेशनसम्म पार्टीको सभापति भए । गिरिजाप्रसादकी एक मात्र छोरी सुजाता कोइराला मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेकी छन् भने हाल पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य छिन् ।
कृष्णप्रसादकी जेठी छोरी इन्दिरा आचार्य पनि राजनीतिमा थिइन् । इन्दिराकी जेठी छोरी शैलजा आचार्य नेपालको पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री पनि हुन् ।
शैलजाको निधन भइसकेको छ । इन्दिरा आचार्यकी कान्छी छोरीसँग कांग्रेस नेता चक्र बास्तोलाकाे विवाह भएकाे थियाे । कांग्रेसमा चार दशक लामो राजनीतिमा लागेका बास्तोला भारतका लागि नेपाली राजदूत, पर्यटन र गृह मन्त्री भएका थिए । पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा लामो अनुभव बटुलेका बास्तोलालाई पाँच वर्षअघि हृदयाघात भएको थियो ।
घरमै उपचार गराइरहेका बास्तोलाको गत वर्ष निधन भयो । बास्तोलाकी भान्जी सरिता प्रसाईं सांसद तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुन् । कृष्णप्रसाद कोइरालाकी बहिनी नलिनी उपाध्यायकी छोरीसँग दिलबहादुुर घर्तीको विवाह भएको हो । घर्ती कांग्रेस पूर्वकेन्द्रीय सदस्य र राज्य व्यवस्था समितिका पूर्वसभापतिसमेत हुन् ।
नेविसंघका संस्थापक अध्यक्ष विपिन कोइराला भने कृष्णप्रसाद कोइरालाको बिर्ता दुम्जाका १३ पुस्ते कोइराला हुन् ।
चन्द्रशमशेरले जागिरबाट गल हत्याएपछि जनकपुरमा बसोबास गर्दै आएका आफ्ना हजुरबुबा सरदार कालिदासको बिँडो थाम्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका सरोज कोइरालाको पञ्चायत कालमा भारतमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
सरोजका पिता भैरवप्रसाद कांग्रेसबाट राजनीतिक उचाइमा नपुगे पनि उनका छोरा सरोज र बुहारी लीला कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत भए । लीला कोइरालाले पार्टी केन्द्रीय सदस्य र विभिन्न मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको अनुभव लिएकी छन् तर हाल राजनीतिमा सक्रिय छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद भएका कपिलवस्तुका कमलेश शर्मा बीपी कोइरालाका सालो हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्मा भने बीपीका साढुभाइ हुन् ।
बीपीका नाति तथा प्रकाश कोइरालाका छोरा सिद्धार्थ भने यतिबेला नेपाल तरुण दलको राजनीतिमा छन् ।
राणा शासनको अन्त्यदेखि पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्न र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको चुनावी खर्च सबै बेहोर्ने र महाधिवेशनको सबै खर्च आफंै गर्न सक्ने क्षमता राख्ने पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेरका नातेदारहरू कांग्रेसको राजनीतिबाट अहिले ओझेलमा छन् ।
स्वर्गीय सुवर्ण शमशेरका जेठा छोरा नेपाली सेनाको उच्च तहमा पुगेर निवृत्त भए भने माइलो छोरा कञ्चन शमशेर पञ्चायती शासनविरुद्धको सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व तहमा थिए । कान्छा छोरा रुक्मशमशेर राणा कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट ओझेलमा छन् ।
भरत शमशेर २०१५ सालको निर्वाचनपछि गठित संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा थिए भने पञ्चायती व्यवस्थापछि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय भए तर पछि निष्क्रिय भएका थिए ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका राणा भारतका लागि नेपाल राजदूतसमेत भइसकेका छन् । उनकी श्रीमती ईश्वरी राणा भने पार्टीको राजनीतिमा छिन् । राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरका नाति सुवर्ण शमशेर हुन् भने चन्द्र शमशेरका पनाति भरत शमशेर हुन् ।
भरत शमशेरका भाइ सागर र सागरका छोरा उदय शमशेर पनि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय छन् । नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष भएका उदय पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वअर्थराज्य मन्त्री हुन् । भरत शमशेरका भजिता गौरव शमशेर भने नेपाली सेनाको अवकाश प्राप्त प्रधानसेनापति हुन् ।
कांग्रेसका पूर्वउपसभापति तथा नेता प्रकाशमान सिंह कांग्रेसका संस्थापक नेता लौहपुरुष गणेशमान सिंह र नेपाल महिला संघकी सस्थापक नेता मंगलादेवी सिंहका छोरा हुन् ।
गणेशमान सिंहका धर्मपुत्र पीएल सिंह काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर हुन् । प्रकाशमानका छोरा नेपाल तरुण दलमा क्रियाशील छन् । प्रकाशमानकी बहिनी कान्ता सिंह विभाजित नेपाल महिला संघको अध्यक्षसमेत भएकी थिइन् ।
कांग्रेसका अर्का पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र प्रदेश ४ सांसद मेखलाल श्रेष्ठ नाताले काका–भतिज हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र डा. प्रकाशशरण महत नाताले दाजुभाइ हुन् । प्रकाशशरण महतसँग ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रीको अनुभव छ ।
२०४६ सालमा आन्दोलन हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको जागिरेका रूपमा इस्लामाबादमा कार्यरत थिए । डा. प्रकाशशरण पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीका नाताले ज्वाइँ हुन् ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद तारणीदत्त चटौतबीच सम्धीको सम्बन्ध छ । पौडेलकी छोरी चटौतका छोराबीच विवाह भएको हो । पौडेलकी कान्छी छोरीको विवाह राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालका छोरासँग भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री स्वर्गीय महेन्द्रनारायण निधिका छोरा हुन् । कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघका पूर्वनेता धु्रव शर्मा निधिका साढुदाइ हुन् भने पूर्वसांसद दीपशिखा ढकाल जेठीसासू हुन् ।
कांग्रेसका चर्चित नेता प्रदीप गिरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा शाही शासनकालमा मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष भएका तुलसी गिरी नाताले दाजुभाइ हुन् । प्रदीप गिरी कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रुद्रप्रसाद गिरीका भतिज (दाजुका छोरा) हुन् ।
कांग्रेसका युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य गगन थापा र केन्द्रीय सदस्य तथा बारम्बार मन्त्री भएका अर्जुननरसिंह केसी ज्वाइँ–ससुरा हुन् । केसीकी कान्छी छोरीसँग गगनको विवाह भएको हो ।
पूर्वसांसद जगदीश्वर नरसिंह केसी अर्जननरसिंहका सहोदर भाइ हुन् । नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसी अर्जुन र जगदीश्वरका भाइ हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय सभाकी पूर्वसांसद तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलकी संस्थापक शारदा पोखरेल नाताले दिदी–भाइ हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद अफताव आलम कांग्रेसका पुराना नेता स्वर्गीय शेख इद्रिसका भतिजा हुन् । अफतावका भाइ महताव आलम नाताले भाइ हुन् । महताव रौतहट कांग्रेसका पूर्वसभापति हुन् ।
कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद डिल्लीप्रसाद सिटौला सहोदर दाजुभाइ हुन् । शहीदपुत्र संविधानसभाका पूर्वसदस्य गणेश विमली नाताले सिटौलाद्वयका भान्जा हुन् ।
कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ, अर्का पूर्वकेन्द्रीय सदस्य स्वर्गीय भूविक्रम नेम्वाङ दाजुभाइ हुन् ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काकी श्रीमती पूर्वसभासद् शिला खड्का हुन् । खड्काकी नाताले सासू पर्ने ईश्वरी न्यौपाने कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष मञ्जु खाँड श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कमला पन्त र कांग्रेस काभ्रेका सभापति मधु आचार्य श्रीमान–श्रीमती हुन् । पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सुनिल भण्डारी र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसभासद रत्न शेरचन श्रीमान् श्रीमती हुन् । कांग्रेसका पुराना नेता वसन्त गुरुङका छोरा कल्याण गुरुङ हाल पार्टी केन्द्रीय सदस्य छन् । विद्यार्थी नेतृ टीका चौधरी र कल्याण श्रीमान् श्रीमती हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेत र पूर्वसांसद एवं पूर्वआमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य पुरुषोत्तम बस्नेत काका भतिजी हुन् । कांग्रेसका पूर्वसांसद तथा पूर्वमन्त्री भक्तबहादुर बलायर र नेविसंघका पूर्व नेता तथा केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायर नाताले दाजुभाइ हुन् ।
नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री उमेशजंग रायमाझी र राष्ट्रिय सभाका सांसद रमेशजंग रायमाझी सहोदर दाजुभाइ हुन् । सिन्धुली कांग्रेसका सभापति उज्ज्वल बराल र पूर्वसभापति मोहनप्रसाद बराल दाजुभाइ हुन् ।
कांग्रेस चितवनका सभापति तथा प्रदेश ३ सांसद मिलनबाबु श्रेष्ठ र पूर्वसभासद अञ्जनी श्रेष्ठ श्रीमान्– श्रीमती हुन् । कांग्रेस भक्तपुरका पूर्वअध्यक्ष राधेश्याम जोन्छेंकी श्रीमती रजनी अमात्य हाल कांग्रेसबाट प्रदेश ३ सांसद छिन् ।
तत्कालीन एमालेभित्रको जालो
तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष तथा नेकपाको प्रदेश ३ अध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र पूर्वएमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
नेकपा सचिवालय सदस्य तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र प्रतिनिधिसभाका सांसद कु. तुल्सी थापा श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
नेकपा सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र पूर्वसभासद् मीरा ध्वजु श्रीमान्–श्रीमती हुन् । एमालेका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डे साढुदाइ–साढुभाइ हुन् ।
दिदी रविलक्ष्मी चित्रकार खनालकी श्रीमती हुन् भने बहिनी पूर्णशोभा चित्रकार पाण्डेकी श्रीमती हुन् । नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डे र अर्का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे दाजुभाइ हुन् । सुरेन्द्र भाइ र राजेन्द्र दाइ हुन् ।
एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल र पूर्वसभासद् ममता गिरी साली–भेना हुन् । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फे र प्रतिनिधिसभाका सदस्य विजय सुब्बा दाजु–बहिनी हुन् ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रतिनिधिसभा सांसद सुजिता शाक्य श्रीमान्–श्रीमती हुन् । नेकपा केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र प्रतिनिधिसभा सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठ श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य विनोद श्रेष्ठ भने कृष्णगोपालका सालो हुन् । तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र अर्का नेता रामकुमार ज्ञवाली सहोदर दाजुभाइ हुन् ।
एमालेका पुराना नेता तथा साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रित र नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डा. विजय पौडेल बाबु–छोरा हुन् ।
पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शेरबहादुुर तामाङ र प्रदेश १ को प्रदेश सांसद उषाकला राई श्रीमान्–श्रीमती हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र प्रतिनिधिसभा सदस्य जुली महतो श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
एमालेका पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी र एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी दाजुभाइ हुन् । मनमोहनकी छोरा बुहारी शान्ति अधिकारी पूर्वसांसद हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल र एमाले केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे सम्धी–सम्धी हुन् । नेपालकी छोरी गौरीसँग पाण्डेका छोराले विवाह गरेका हुन् ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नरेश खरेल र प्रतिनिधिसभाकी सांसद पवित्रा निरौला खरेल श्रीमान्–श्रीमती हुन् । नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापा र प्रतिनिधिसभाकी सांसद कमलाकुमारी ओली श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद विरोध खतिवडा र प्रदेश ३ सांसद मनु सिग्देल श्रीमान्–श्रीमती हुन् । प्रतिनिधिसभाकी सांसद सुशीला नेपाल र ललितपुर जिल्लाका नेकपाका नेता खगेन्द्र नेपाल श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
एमाले मोरङका पूर्वअध्यक्ष महेश रेग्मीकी श्रीमती सावित्राकुमारी रेग्मी प्रदेश १ सांसद हुन् ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्की र पूर्वसभासद् दीपक कार्कीका सहोदर भाइ हुन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी र एमालेका स्वर्गीय नेता भरतमोहन अधिकारी सहोदर दाजुभाइ हुन् । वामपन्थी नेतृ स्वर्गीय साहना प्रधान मनमोहनकी साली हुन् ।
तत्कालीन माओवादी पनि अछुतो छैन
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाकोे मेयर छिन् । दाहालकी कान्छी छोरी गंगाका श्रीमान् जीवन आचार्य नेकपा मोरङका नेता हुन् । उनी गत प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका केदार कार्कीसँग पराजित भएका थिए ।
प्रचण्डकी बुहारी (छोरा स्वर्गीय प्रकाशकी श्रीमती) बिना मगर खानेपानी मन्त्री छिन् । दाहालका भाइ (काकाको छोरा) नारायण दाहाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र नेकपा तीन नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज छन् ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सीपी गजुरेल दाजुभाइ (दाजुभाइका छोराहरू) हुन् । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगर र ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुन श्रीमान्– श्रीमती हुन् ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत र पूर्वमन्त्री एवं सांसद सत्या पहाडी श्रीमान्–श्रीमती हुन् । पूर्वगृहमन्त्री तथा माओवादी नेता जनार्दन शर्माका भाइ अनिल शर्मा अखिल क्रान्तिकारीका नेता हुन् । उनी अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष र काठमाडौं एकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनी पराजित भएका थिए ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नेता देव गुरुङकी श्रीमती यशोदा गुरुङ सुवेदी हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् । नेकपाका नेता हितमान शाक्य र सांसद अमृता थापा मगर श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
नेकपा नेता लीलामणि पोखरेल श्रीमती शशी श्रेष्ठ पोखरेल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति हुन् । पूर्वसभासद् श्याम श्रेष्ठ लीलामणिका जेठान हुन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा एटम महरा अखिल क्रान्तिकारीका नेता हुन् ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष हुन् । माओवादी नेता क्रान्तिकारी पत्रकार संघका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल र प्रदेश ३ सांसद सीता अधिकारी श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
नेकपा नेता कृष्णध्वज खड्काकी श्रीमती रेखा शर्मा प्रतिनिधिसभाकी सांसद हुन् । नेकपा नेता रामकुमार शर्माकी श्रीमती इन्दुकुमारी शर्मा पनि प्रतिनिधिसभाकी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
नेकपा मालेका संस्थापक महासचिव सीपी मैनाली कम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनालीका सहोदर भाइ हुन् ।
माले र माक्र्सवादी पार्टीबीच २०४७ सालमा एकता भएपछि एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य भएका सीपी र राधाकृष्ण मैनाली एमाले फुटाएर माले गठन गर्दा समेत सँगै थिए । सीपी र मालेकी पूर्वसभासद् निलम केसी (सीता खड्का) श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
नयाँ शक्ति नेपालका तत्कालीन संयोजक तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र नेतृ हिसिला यमी श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।भट्टराईकी छोरी मानुषी पनि राजनीतिमै सक्रिय छिन् । नेकपा मसालका अध्यक्ष तथा अर्धभूमिगत वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंह र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रतिनिधिसभा सांसद दुर्गा पौडेल श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
राजावादी पनि कम छैनन्
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा अखिल नेपाल फुटबल संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा सहोदर दाजुभाइ हुन् ।
राप्रपाकै नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र अर्का नेता तथा पूर्वमन्त्री जयन्त चन्द बाबु–छोरा हुन् ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम तथा हाल समाजवादी पार्टीको उपाध्यक्ष हेमराज राई र अर्का नेता भूराज राई दाजुभाइ हुन् ।
मधेसवादीमा पनि उस्तै
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोकी श्रीमती शैलदेवी महतो सभासद् हुन् । उनका भजिता (दाजुको छोरा) उपेन्द्र महतो प्रदेश २ सांसद छन् ।
उपेन्द्रका पिता महेन्द्र महतो भने सर्लाहीकै चन्द्रपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन् । अनिलकुमार झाकी श्रीमती डा. डिम्पलकुमारी झा प्रदेश २ सांसद छिन् ।
अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य राजकिशोर यादवकी श्रीमती सरिता यादव पूर्वसांसद हुन् । राजपा उपाध्यक्ष शेखर सिंहका छोरा सतिससिंह सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् ।
सर्लाही–१ का बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोद साह र राजपाकी प्रदेश २ सांसद निराकुमारी साह श्रीमान्–श्रीमती हुन् । सरिता गिरी लक्ष्मण गिरीकी श्रीमती हुन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २३, २०७६, ०२:४२:००